कसरी PowerPoint बाट प्रस्तुतीकरणहरू गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
लोला करील | | डिजाइन उपकरणहरू, ट्यूटोरियलहरू, धेरै
माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणहरूको लागि एक धेरै प्रयोग गरिएको उपकरण हो। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र अनन्त सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ जब यो सिर्जनात्मक र पेशेवर डिजाइनहरू सिर्जना गर्ने आउँदछ। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई यो कार्यक्रम स्क्र्याचबाट कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनेछौं, हामी तपाईंलाई आधारभूत उपकरणहरूको परिचय दिनेछौं र हामी तपाईंलाई तपाईंको स्लाइडहरूको साथ सफल हुनको लागि केही सिफारिसहरू समावेश गर्दछौं। के तपाईं PowerPoint को साथ प्रस्तुतीकरणहरू कसरी गर्ने सिक्न चाहनुहुन्छ? बाँकी पोष्ट नभुल्नुहोस्।
1 PowerPoint मा सुरू गर्नुहोस्
1.1 कागजात खोल्नुहोस्
1.2 नयाँ स्लाइड सिर्जना गर्नुहोस्
1.3 शासकहरू र गाइडहरू देखाउनुहोस् वा लुकाउनुहोस्
2 PowerPoint प्रस्तुतीकरणहरू बनाउनको लागि मुख्य उपकरणहरू
2.2 पाठ उपकरणहरू
2.3 इमेजिंग उपकरणहरू
2.3.1 कोष उपकरण हटाउनुहोस्
2.3.2 प्रभाव र समायोजन
2.5 ग्राफिक्स उपकरण
3.1 बाह्य स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्
3.2 रंगको ख्याल राख्नुहोस्
PowerPoint मा सुरू गर्नुहोस्
जब तपाइँ प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ, तपाइँ त्यो देख्नुहुनेछ पावरपोइन्टले टेम्पलेट्स प्रस्ताव गर्दछ जुन पहिल्यै डिजाइन गरीएको छ र तपाईंको सामग्री सम्मिलित गर्नका लागि तयार छ। अवश्य पनि तपाइँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर यस पोष्टमा हामी खाली कागजात छनौट गर्न रोज्नेछौं जुनमा हामी तत्व र स्रोतहरू थप्नेछौं। राम्रो जान्नको लागि, स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुहोस्!
यदि तपाईंसँग पहिले नै प्रोग्राम छ भने, पनि तपाईं फाईल ट्याब> नयाँ प्रस्तुतीकरण क्लिक गरेर नयाँ कागजातहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ शीर्ष मेनूमा।
नयाँ स्लाइड सिर्जना गर्नुहोस्
गृह प्यानलमा तपाईंसँग एक बटन छ जुन भन्दछ "नयाँ स्लाइड", यसमा क्लिक गरेर तपाईं नयाँ स्लाइडहरू उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ बटनको दायाँ मा सानो तीर थिच्नुभयो, तपाईं त्यो देख्नु हुनेछ तपाईं स्लाइडहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन पूर्वनिर्धारित टेम्पलेट अनुसरण गर्दछ। सबै प्रकारका सामग्रीहरू क्रमबद्ध गर्न डिजाइनहरू छन्: शीर्षक, शीर्षक र सामग्री, डबल सामग्री, तुलना गर्न ...
यद्यपि प्रोग्रामका उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने जान्न हामीलाई स्लाइड जति सक्दो बेयर हुनु आवश्यक छ, त्यसकारण हामी कुनै पनि सेलेक्ट गर्ने छैनौं र हामी आफ्नो स्लाइड खाली छोड्दैछौं।
शासकहरू र गाइडहरू देखाउनुहोस् वा लुकाउनुहोस्
"आँखा द्वारा" तत्व वितरण नगर्ने क्रममा हामी नियमहरू र गाइडहरू सक्रिय गर्न गइरहेका छौं। गाइडहरूले हामीलाई सबै स्लाइडहरूमा समान मार्जिन राख्न मद्दत गर्दछ प्रस्तुतिको।
नियम र मार्गनिर्देशनहरू सक्रिय गर्न, तपाईंले के गर्नुपर्दछ उनीहरूलाई "दृश्य" ट्याबमा चयन गर्नुहोस्।। मेरो सिफारिश भनेको केन्द्रीय गाइडहरू, ठाडो र तेर्सो राख्नुहोस्। स्क्रिनलाई चारमा विभाजित गर्नु तपाईंको टुक्राहरूलाई राम्रोसँग अर्डर गर्न राम्रो ट्रिक हो।
तपाईको स्लाइडको मार्जिन कस्तो हुन्छ भनेर परिभाषित गर्न तपाईले चार अन्य गाईडहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ। नयाँ गाईडहरू सिर्जना गर्न तपाईले आफ्नो कम्प्युटर किबोर्डमा "विकल्प" कुञ्जी थिच्नु पर्दछ र अवस्थितहरू तान्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि जब तपाईंले यो गर्नुहुन्छ बक्स देखा पर्नेछ जुन उनीहरूले उचाई जुन तपाईं राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। एकचोटि तपाईंले यो चरण पूरा गर्नुभयो, तपाईं डिजाईन सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ!
PowerPoint प्रस्तुतीकरणहरू बनाउनको लागि मुख्य उपकरणहरू
यो उपकरण सजावटी तत्वहरू सिर्जना गर्न धेरै उपयोगी हुन सक्छ जुन तपाईंको डिजाइनलाई पहिचान र एकता दिन्छ। आकारहरू थप्न, हामी प्यानल "सम्मिलित"> "फारमहरू" मा जान्छौं। तपाइँले एउटा सानो मेनू खोल्नुहुनेछ जुन तपाइँ तपाइँको चाहानुहुने तरिका छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
फारमको विशेषताहरु परिवर्तन गर्न हामी फारम फर्म्याट प्यानलमा जान्छौं, त्यहाँ तपाईं भर्ने रंग परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं बोर्डर थप्न सक्नुहुन्छ र केही प्रकारको प्रभाव लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो केसमा म कालो आयतहरू सँग खेल्न गइरहेको छु विभिन्न स्लाइड मोडेलहरू सिर्जना गर्न:
म हेडब्यान्डको रूपमा आयत प्रयोग गरेर मोडेल सिर्जना गर्दछु, यसलाई स्लाइडको तल राख्ने
म कालो पृष्ठभूमि सहित स्लाइड सिर्जना गर्दछु
अन्तीममा, म अरू दुई मोडेलहरू सिर्जना गर्नेछु जहाँ आयतले स्क्रिनलाई दुईमा विभाजन गर्न अनुमति दिन्छ (एउटा दायाँको आकारको साथ र अर्को बायाँको आकारको साथ)
साथै तपाईं पाठ बाकसको रूपमा आकारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, सामग्री को केहि भाग हाइलाइट गर्न।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने अनुकूलन आकारहरू सिर्जना गर्नुहोस्, तिमीले यो गर्न सक्छौ! केवल आकारमा क्लिक गर्नुहोस् र ढाँचा प्यानलमा "परिमार्जन बिन्दु" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। मूल आकार परिवर्तन गर्न।
ढाँचा प्यानलमा तपाईं आकारहरू पनि व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आकारहरुलाई अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ, पछाडि पठाउन सक्नुहुन्छ र प tool्क्तिबद्ध उपकरण प्रयोग गरेर तपाई पक्का गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै तत्वहरु पूर्ण रुपमा अवस्थित छन्।
पाठ उपकरणहरू आवश्यक छन् यदि तपाईं राम्रो प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने। को लागी एउटा पाठ बाकस सिर्जना गर्नुहोस् तपाईले प्यानलमा जानु पर्छ "घुसाउनुहोस्" र "पाठ बाकस" चयन गर्नुहोस्.
तपाईं एकल क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ताकि बाकसले तपाईंलाई के लेख्न लागेको छ भने अनुकूल हुन्छ वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं माउस तान्न सक्नुहुनेछ ताकि पाठ विशेष आकारमा सीमित होस्।
त्यो सम्झनुहोस् तपाईं रेखांकित गर्न सक्नुहुन्छ र ध्यान आकर्षण गर्न एक हाइलाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको पाठको विशेष भागहरूमा। उदाहरणको लागि, मैले सेतो फन्ट परिवर्तन गर्न सक्षम हुन कालो र हाईलाइट हाईलाईट गरेको छु र पाठकलाई भनिएको विरोधाभास सिर्जना गर्दछ: "यो महत्त्वपूर्ण छ"।
अन्य पाठ विकल्प वर्डआर्ट हो, पाठहरू जुन आउँदैछन् PowerPoint द्वारा डिजाइन गरिएको र त्यसमा विशेष प्रभाव र सुविधाहरू छन्। तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्पर्श दिन वा तिनीहरूलाई प्रस्तुतीकरण शैलीमा अनुकूलन गर्न अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरू तपाईंको हेडलाइटहरूको लागि उत्कृष्ट स्रोत हुन्।
छविहरू एक हुन् धेरै शक्तिशाली संचार उपकरण, किनभने तिनीहरू धेरै थोरै ठाउँमा सामग्रीको एक ठूलो मात्रा संक्षेप गर्न र एक ठूलो प्रभाव पैदा गर्न सक्षम छन्।
त्यहाँ छन् छविहरू थप्न दुई तरिकाहरू तपाईंको PowerPoint मा:
तपाईं प्यानलमा "घुसाउनुहोस्"> "छविहरू" मा जान सक्नुहुन्छ र "छविबाट छवि" चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं छविबाट सिधा फोल्डरबाट तान्न सक्नुहुन्छ।
कोष उपकरण हटाउनुहोस्
पृष्ठभूमि बिना छविहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको स्लाइडहरूमा फरक स्पर्श थप गर्न मद्दत गर्दछ। शुभ समाचार यो हो कि, "पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्" उपकरण को लागी धन्यवाद, तपाई आफ्नो फोटोहरुबाट पृष्ठभूमि हटाउन सक्नुहुन्छ पावरपोइन्ट नछोडी।
La उपकरण "कोष हटाउनुहोस्", यो "छवि ढाँचा" प्यानेलमा उपलब्ध छ, जुन स्वचालित रूपमा स्क्रिनको माथि देखा पर्दछ जब तपाईं कुनै छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, तपाईंसँग गर्नुपर्दछ तपाईले के राख्न चाहानुहुन्छ र "-" तपाईले हटाउन चाहानु भएको पेन्सिलसँग "+" चयन गर्नुहोस् छवि बाट जब तपाईं समाप्त गर्नुहुन्छ, परिवर्तनहरू हराउनको लागि टिकमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रभाव र समायोजन
तपाईंको छविहरूसँग समान शैली रहेको तपाईंको प्रस्तुतीकरणमा गुणस्तर बोनस दिन सक्छ। छवि ढाँचामा, तपाईंसँग दुई उपकरणहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईं फोटोहरूमा समायोजन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो छविहरूलाई एक एकीकृत लुक दिन सुधार र रंग समायोजन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ स्लाइड को। उदाहरण को लागी, म कालो र सेतो मा आफ्नो छविहरु को लागी रोजेको छु र मैले चमक समायोजित छ ताकि परिणाम अझ राम्रो छ।
प्रतीकहरू, छविहरूसँग पनि सानो स्थानमा अवधारणाहरूको सारांशमा सामर्थ्य हुन्छ। भाग्यवश PowerPoint मा तपाइँ प्रोग्राम छोड्नु नगरीकन आईकनहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ "सम्मिलित" प्यानलमा "आईकनहरू" थिच्नुहुन्छ भने, तपाइँले छेउ प्यानलमा पहुँच गर्नुहुनेछ जहाँ तपाइँसँग छनौट गर्न अनगिन्ती आईकनहरू छन्। फिल्टर ईन्टरनेट प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंलाई छिटो चाहिएको फेला पार्न। "ग्राफिक्स ढाँचा" प्यानलमा, माथि देखा पर्दछ जब तपाईं ती मध्ये कुनै एक थिच्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई तपाईंको प्रस्तुतीकरणको शैलीमा अनुकूल गर्न।
दृश्यहरू द्रुत, छिटो र स्पष्ट रूपमा विचार व्यक्त गर्न ग्राफिक्स धेरै उपयोगी छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हिम्मत गर्नुहोस्! यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि ग्राफिक्सले केवल सुपर विस्तृत डेटा देखाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्दैन, तपाईं तिनीहरूलाई वैकल्पिक तरिकामा सन्देश पुर्‍याउन रचनात्मक स्रोतको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं गएर ग्राफिक्स थप्न सक्नुहुन्छ प्यानल "सम्मिलित गर्नुहोस्"> "ग्राफिक्स"। तपाईं यसैले सानो ड्रप-डाउन प्यानलमा पहुँच गर्नुहुनेछ जुन सबै प्रकारका ग्राफिक्स जुन PowerPoint प्रस्ताव गर्दछ। सबै भन्दा उपयुक्त र छनौट गर्नुहोस् एक एक्सेल पाना खुल्नेछ जुन तपाईं डाटा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं समाप्त गर्नुहुन्छ, स्प्रिडशिट बचत गर्न आवश्यक छैन, मात्र यसलाई बन्द गर्नुहोस्, जब तपाईं डाटा प्रविष्ट गर्दै हुनुहुन्छ ग्राफ परिमार्जन हुनेछ।
तपाईं चार्टको शैली परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, पाठको भाग र ग्राफिक भाग दुबै। तपाईं फन्ट र आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। ढाँचा प्यानलमा तपाईं ग्राफिक शैली र रंगहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
बाह्य स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्
बाह्य स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस् यो स्लाइड को डिजाइन समृद्ध गर्न को लागी एक राम्रो विचार हो। यद्यपि पावरपोइन्ट एक पूर्ण पूर्ण प्रोग्राम हो र तपाईले यसलाई प्रदान गर्ने संसाधनहरूका साथ महान प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, एक अतिरिक्त रचनात्मकताले कहिल्यै पनि चोट पुर्‍याउँदैन!
उदाहरणका लागि, तपाईं Google मा Picsart मा जान सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न स्टिकर त्यो स्लाइड को एक अधिक विशेष स्पर्श दिन को लागी सेवा गर्दछ। म प्राय: शब्दहरूको साथ खोजी गर्दछु "भिन्टेज", "टेप", "पाठ बक्स" र म ती चीजहरू प्रयोग गर्दछु जसले मलाई सब भन्दा टेक्स्ट बक्स वा तस्वीर फ्रेमको रूपमा विश्वास गर्दछ।
रंगको ख्याल राख्नुहोस्
र Color्ग एक संचार उपकरण पनि हो, यो बोध गर्ने भावनाहरू र भावनाहरू सक्षम पार्दछ। पेस्टल शेडहरूको यस संयोजनलाई पहेलो, कालो र सेतो संयोजनको रूपमा छनौट गर्न समान छैन। पछिल्लोको विरोधाभास, सेतो वा पहेलोको साथ गाढा पृष्ठभूमिको संयोजन, त्यो अझ राम्रो देखाउँदछ। साहसिक र जोखिम को सन्देश जुन मैले उदाहरणमा प्रयोग गरेको छु। पेस्टल मूर्खहरू, तथापि, प्रचार गर्नको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ, उदाहरणका लागि, बच्चा कपडाको ब्रान्ड।
यदि तपाईंलाई प्रेरणा चाहिन्छ भने तपाईं कलर लवरमा जान सक्नुहुन्छ, वेब पृष्ठ जहाँ तपाईं प्यालेटहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन पहिले नै सिर्जना गरिएको थियो। साथै एडोब र Colorमा जानका लागि यो राम्रो स्रोत हो सामन्य संयोजनहरू सिर्जना गर्न जुन उत्कृष्ट कार्य गर्दछ।
PowerPoint मा तपाईं आफ्नै रंग प्यालेट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यी प्यालेटहरू मध्ये एकलाई पावरपोइन्टमा ल्याउन, म सामान्यतया के गर्दछु यसको स्क्रिनसट लिन्छु, यसलाई स्लाइडमा घुसाउनुहोस् र आईड्रोपरको साथ म सबै र colorsहरू बचत गर्छु जुन म पछि मेरो प्रस्तुतीकरणका तत्वहरूमा लागू गर्छु।
टाइपोग्राफी, र color्ग जस्तै, संचार गर्दछ, त्यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईं सही फन्ट छनौट गर्न समय लिनु पर्छ। यदि तपाईं पहिले नै स्थापना गर्नुभएको फन्टहरू द्वारा तपाईं सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईं इन्टरनेटबाट नयाँ फन्टहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल फन्ट एक उत्तम ज्ञात फन्ट बै of्क हो र सबैभन्दा विश्वासिला मध्ये एक हो।
नयाँ फन्टहरू स्थापना गर्न तपाईले आफूले चाहेको एउटा चयन गर्नुपर्दछ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, फाईल खोल्नुहोस् र फन्ट स्थापना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » कसरी PowerPoint सँग प्रस्तुतीकरणहरू गर्ने